“Collagen” သောက်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက် -
“Collagen” သောက်ချင်တဲ့ သူတွေအတွက်
“Collagen ကော်လာဂျင်ဆိုတာ တကယ်ရော လိုလို့လား”
ကော်လာဂျင်လို့ပြောလိုက်ရင် ဒီဘက်ခေတ်မှာ မကြားဖူးတဲ့လူတော်တော်ရှားမယ်ထင်ပါရဲ့။ အသားအရေအတွက်၊ ဆံပင်အတွက် အရိုးအဆစ်အတွက် စသည်ဖြင့်တော်တော်များများလည်း သောက်ကြပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေရော ကော်လာဂျင်သောက်ကြပါသလား? မသောက်သေးဘူး သောက်မယ်လို့ စဉ်းစားနေရင်ကော်လာဂျင်အကြောင်းလေး သိရအောင် အကျဉ်းချုံးလေးပြောပြပေးချင်ပါတယ်။
Collagen ဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ အရေပြား၊ အရိုး၊ သွေးကြောတွေ၊ ကလီစာတွေမှာ အများကြီးရှိပြီး တင်းတင်းရင်းရင်းရှိအောင် ထိန်းပေးထားတဲ့ အမီနိုအက်ဆစ်တွေနဲ့ ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ကော် လို ပရိုတင်းလေးတစ်မျိုးပါ။
အမျိုးအစားပေါင်း ၂၀ ကျော်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲက အများဆုံးတွေ့ရတာက Type ၁၊၂၊၃၊၄၊၅ ပါ။
အသားအရေ၊ ဆံပင် တွေအတွက် အဓိကလိုတာက ၁ နဲ့ ၅ ပါ။ ၂ ကတော့ အရိုးအဆစ်တွေ အတွက်အဓိကလိုပါတယ်။
၃။ ကော်လာဂျင်သောက်ရင် ဘာအကျိုးတွေရှိလဲ?
အရေပြားတွေကို အစိုဓါတ်ပြည့်ပြီးတင်းရင်းစေတယ်။ လူကြီးတွေမှာ ဒူးနာတာတွေကို သက်သာစေပြီးအရိုးတွေကို သန်မာလာစေတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်တာ သက်သာပြီး ထူလာစေတယ်။ လက်သည်းတွေကိုလည်း သန်စွမ်းစေပါတယ်။
တကယ်တော့ အသက်ကြီးလာလေလေ ခန္ဓာကိုယ်က ကော်လာဂျင်ဆုံးရှုံးမှုတွေများလာလေလေပါပဲ။ နေရောင်ခြည်နဲ့ထိတွေ့တာတွေ၊ ဆေးလိပ်သောက်တာတွေကြောင့်လည်း ကော်လာဂျင်ကပျက်စီးတတ်ပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေ အရ ဖြည့်စွက်စာအနေနဲ့သောက်မလားဆိုတာကို အခုထိငြင်းခုန်နေဆဲပါပဲ။
၅။ ပရိုတင်းဆိုတော့ အစာအိမ်မှာဖျက်ဆီးမလား။ဟင်းချိုတွေမှာလည်း ထည့်ကျတော့ အပူနဲ့တွေ့ရင်ပျက်ဆီးမလား?
ကော်လာဂျင်မှ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်ပရိုတင်းအမျိုးအစားမဆို အပူနဲ့တွေ့ရင် အစာအိမ်မှာဖျက်ဆီးရင် ပျက်ဆီးသွားပါတယ်။ ဖျက်ဆီးရာကထွက်လာတဲ့ အမီနိုအက်ဆစ်အလုံးလေးတွေကို ကုန်ကြမ်းအနေနဲ့ယူပြီးခန္ဓာကိုယ်က ကော်လာဂျင်အသစ်ပြန်လည်တည်ဆောက်တာပါ။
၆။ ကော်လာဂျင်အစားရော ဘာအစားအသောက်တွေစားလို့ရလဲ?
အမီနိုအက်ဆစ် Proline , Glycine များတဲ့အစားအသောက်တွေ ဥပမာ-ငါးအရေခွံတွေ၊ အမဲသားအရွတ်၊ ဝက်အူတွေ၊ ကြက်ရိုးနုတွေ မှာအများဆုံးတွေ့ရတတ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် ကော်လာဂျင် တည်ဆောက်မှုကို ဗိုက်တာမင်စီ (Vitamin C)၊ ဇင့် ၊ ကော့ပါး ( Copper )တို့ကလည်းအားပေးပါတယ်။
၇။ ကော်လာဂျင်သောက်ရင် ဘာဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိလဲ?
ပါးစပ်ကနေသောက်တဲ့အခါအဝင်ဆိုးတာတွေ၊ ဗိုက်ကယ်တာတွေ၊ ရင်ပူတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နဲ့ နို့တိုက်မိခင်တွေမှာ သောက်လို့ရလားဆိုတာတော့လုံလောက်တဲ့လေ့လာမှုတွေမရှိသေးပါဘူး။
စျေးကွက်ထဲမှာတော့ ကော်လာဂျင်အမျိုးအစားတွေအများကြီးပါပဲ။ မိမိအနေနဲ့သောက်လား မသောက်မလားလည်း စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင် ဒီစာလေးဖတ်ပြီး အနည်းငယ်အကျိုးရှိမယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။ စာဖတ်သူတွေရော ကော်လာဂျင်သောက်ပါသလား။ ဘာလို့သောက်လဲဆိုတာလေးတွေလည်း Comment မှာပြောသွားပေးပါဦး။
Nov 8, 2021 Health Tips, Healthy & Beauty
ကလေးငယ်တွေမှာ တွေ့ရများတဲ့ ADHD လက္ခဏာများ
အသည်းရောင် အသားဝါပိုးများအကြောင်း သိကောင်းစရာ